Puntland oo Muqdisho Tababar ugu Diraysa Ciidamo ka tirsan Booliska – Radio Daljir
Nofeembar 8, 2015 12:42 b 0
November 08, 2015 (Daljir) — Booliiska dowladda Fadaraalka ayaa baabuur iyo Mootooyin ugu deeqay booliiska Puntland kuwaas oo dhawaan laga qaaday magaalada Muqdisho’iyagoona maalmaha soo socda dooni laga soo saari doono dalka Cumaan.
Taliyaha Booliiska Puntland Sareeye Guuto Cabdirisaaq Afgaduud ayaa sheegay in booliiska dowladda Fadaraalka uu ugu deeqay baabuur iyo Mootooyin kuwaas oo dhawaan dooni laga soo saari doono dalka Cumaan, islamarkaana laga soo dajin doono bosaso.
Cabdirisaaq Afgaduud ayaa tilmaamay in labada booliis ay leeyihiin wada shaqayn wanaagsan, islamarkaana ay labada taliye oo dhawaan ku kulmay Muqdisho iyo Garowe ay kawada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta Booliiska.
Waxaa uu sheegay taliyuhu in maalmaha soo socda ay Muqdisho udiriyaan ciidan ka tirsan Booliiska Puntland kuwaas oo lasoo bari doono sida loo baaro Miinada, AFgaduud ayaa xusay in tababarka ciidanka ay ku timi wada shaqaynta ay sheegeen labada booliis, isagoo intaa ku daray in lasoo siin doono gaadiid.
AFgaduud ayaa carababay in Booliiska Puntland ay ka qayb galeen shirka booliiska Caalamka oo lagu qabtay dalka Angola’waxaa uu sheegay in horay Puntland aysan uga qayb gali jirin,islamarkaana aysan war uhayn jirin.
Shirkaas ayaa uu sheegay in Puntland uu uga qayb galay kornay Ibraahin oo ah madax dambi baarayaasha Puntland, halka dowladda fadaraalkana ay uga qayb galeen labo xubnood.
Cabdirisaaq Afgaduud ayaa tan markii lo magacaabay taliyaha booliiska Puntland waxaa Booliiska Puntland laga dareemayaa isbadal dhanka tababarada iyo shaqooyin ka ah,waxaana si weyn looga dareemay isbadalka Booliiska magaalooyin qaarkood.
Degmada Burtinle oo laga Bilaabay Canshuur-Qaadista Gaadiidka